Jurgen Klopp Kuberekwa Nhau Plus Untold Biography Facts
musha FOOTBALL MANAGER Jurgen Klopp Kuberekwa Nhau Plus Untold Biography Facts
LB inopa Nyaya Yese yeMutungamiri weBhola uyo anozivikanwa zvikuru nezita reNickname; 'Munhu Wemunhu'. Our Jurgen Klopp Childhood Story pamwe neS Untold Biography Facts inounza kwauri nhoroondo yakazara yezviitiko zvinoshamisa kubvira paudiki hwake kusvikira zuva. Kuongorora kunosanganisira nhau yehupenyu hwake musati mazivikanwa, hupenyu hwemhuri uye dzakawanda OFF uye ON-Pitch zvishoma zvakazivikanwa pamusoro pake. Pasina mubvunzo, Jurgen Klopp anozivikanwa nokuda kwekuda kwake uye nyeredzi yepamusoro. Paanenge achipinda muimba, vanhu vanocherechedza. Kunyange iwe pane upenzi hushoma pamusoro pake, munhu wose anongoda nzira yaanoda hupenyu.
Jurgen Klopp Kuberekwa Nhau Plus Untold Biography Facts -Upenyu Hwokutanga Muhupenyu
Jurgen Klopp Childhood Indaba
Jurgen Norbert Klopp akaberekerwa muStuttgart Germany munaJanuary 26th, 1963 kuna baba Mr Norbert Klopp, uyo aiva muchengeti wemutambo akanaka uye amai vaElfred Klopp, uyo aiva munhu anotengesa.
Klopp akapedza nguva yakawanda yehuduku hwake hwose muGermany Black Forest musha weGlatten apo iye nehanzvadzi dzake mbiri dzakwegura (Isolde Reich uye Stefanie Klopp) akarerwa nevabereki vake.
Klopp akabatana nevamwe vose semwana. Upenyu hwake hwemucheche hwakanga huri pakati pezwi rimwechete rokuti 'Kuvimbika'. Haambodi kurota chikuru. Anogara achigara zvishoma semukomana. Icho chaiva chokwadi, simba rake. Kuzvipira uye kuzvipira kuzvizvarwa zvake.
Jurgen Klopp Kuberekwa Nhau Plus Untold Biography Facts -Kukura
Jurgen Klopp (Kukura)
Somukomana, Klopp anotaura zvaanoreva, uye zvinoreva zvaanotaura. Upenyu hwake hwehuduku hwakanga huri kuve mutambi wenhokwe uye mutungamiri mukuru webhola.
Dota rake yebhobho yakatanga paakazobatana neboka rake rekuGermany raiti boka Ergenzingen panguva ye 16. Akanga akavimbika kumutambo kubva pakutanga. Kuvimbika kwaari kunoreva kuzadzisa kurota uku kukuru munyika yake yaanoda, Germany.
Jurgen Klopp paakanga achiri muduku zvikuru akadzidza kuti haafaniri kuzvitora zvakanyanya, uye anofara kuva chiroro chesekwese wevanhu vose. Anotenda kuti zvinhu hazvigoni kufamba munzira yake nguva dzose, asi anozvikwidza uye anoedza zvakare. Anoratidzika akasununguka paanomukandira mune imwe nzvimbo. Somunhu akanaka, nguva dzose anochengeta imba yake pamafudzi ake. Anofunga asati aita, uye haamurega iye achifunga kuti awane zvakanakisisa kwaari.
Jurgen klopp's boyhood kurota akazozadzika sekuonekwa kwake pakukwanisa kuva vose mutambo uye mutambi mukuru webhola muGermany.
Klopp akapedza nguva yakawanda yenguva yake yeC15-kutamba basa pa Mainz 05. Akatanga mutambi wekambani asati atendeukira kumudziviriri wekudzokera kumashure mu1995. Akatora zvikamu zve 52 zvinangwa zveSaintz.
Paanenge achisarirwa kutora basa Mainz 05, Klopp akasarudzwa semutungamiri wekambani pa 27 February 2001 mushure mekuvharwa kwe Eckhard Krautzun. Akaramba ari maneja wemakore manomwe, panguva iyo akatungamira boka kuti rive kuonekwa kwayo pakutanga Bundesliga, uye chikwata chei 2005-06 UEFA Cup.
Muna 2008, Klopp akabatana Borussia Dortmund, zvichivatungamirira kumushure-kumushure Bundesliga anowirirana 2011 uye 2012, Uyewo DFB-Pokal in 2012, ivo DFL-Supercup in 2013 uye 2014, uye kuonekwa kwavo kwechipiri mune UEFA Champions League ekupedzisira 2013.
Klopp akakunda Mutambi weGermany Mutambo weGore in 2011 uye 2012, vasati vabva Dortmund mu2015 uye vavewo mutariri wavo anoshanda kwenguva refu. Akazova maneja we Liverpool munaOctober 2015. Iye ndiye wechipiri weGermany akamboshanda muLigeria League. Wokutanga aiva Felix Magati uyo akatora Fulham mu2014.
Jurgen Klopp Kuberekwa Nhau Plus Untold Biography Facts -vabereki
Jurgen Klopp muElizabeth Klopp, akamboti: "Mwanakomana wangu anofambidzana nevanhu vose. Akatamba bhora muminda kunze kwechando uye munguva yechando akaisa chinangwa muimba yekugara. ".
Jurgen Klopp naamai, Elisabeth Klop
Iyi ndiyo nzira iyo anorondedzera kubudirira kwomwanakomana wake kune wese. Nzira yake yekureva inowanzoita kuti vave mari yevamwe.
Maererano naKlopp, "Vabereki vangu vose vakanga vari mapuraneti maviri akasiyana. Amai vanonzwisisa zvose, baba havana kunyanya. Asi zvirokwazvo akaedza kupa mazano uye akaedza kuvaka moto mukati mangu kuti ave nani uye kuti asagutsikane zvakare kare uye zvinhu zvakadai ".
Achitaura pamusoro peaimutamba ari mubhokisi uye baba vatengesi, avo vakamudzidzisawo kutamba uye kutamba tennis, Klopp akati: "Rombo rangu nderokuti ini nguva dzose ndaida zvaaida." Ndinorangarira iye achindiudza nguva dzose, "Simbi inorodza simbi sezvinoita munhu anorodza munhu."
Klopp akaora mwoyo apo Norbert akafa mu 2000, ane makore ane makore makumi maviri nemakumi mana, anotevera makore maviri akarwa nekenza, kunyanya nokuti baba vake havana kumuona akava mudzidzisi wepamusoro kuDortmund mu68.
Baba vaJurgen Klopp, Norbert Klopp
Mushure mekufa, Klopp akataurira vateveri va20,000 nemisodzi ichiyerera pasi nechiso chake ndokuti: "Zvese zvandinenge, zvose zvandinogona, iwe unondipa baba. Ndichiri kufunga kuti uri kutarisa pasi kwandiri kubva kumusoro. "
Jurgen Klopp Kuberekwa Nhau Plus Untold Biography Facts -Ukama Hupenyu
Klopp is divorcee. Akanga akaroora Sabine Klopp uyo ane mwanakomana Marc, uyo akatamba Dortmund asi kukuvadzwa kwakanyanya kwakamuita kuti abve pamutambo. Klopp uye waimbova mudzimai wake vakasarudza kuparadzana munguva yekutanga 2001.
Jurgen Klopp uye Ex mudzimai; Sabine Klopp
Vaiva nemwanakomana Marc, 26, uyo achangobva kutora mubhodhi nekuda kwekukuvara. Vakaroorana vakapatsanurwa nguva pfupi Klopp akava muteja wechikwata mu2001.
Akasangana neUlla anoshamisika paakanga ari mutariri weMainz 05 uye akanga ari muchengeti wepakati munharaunda yemunharaunda.
Klopp anoti aifarira chokwadi chokuti mudzidzisi akadzidziswa, ane mwanakomana Dennis, 27, kubva kumuchato wake wokutanga, "akanga asiri mutambi webhola uye haana kundiziva. Ndakawana izvozvo zvinonakidza ".
Vakaroorana vakaroora mu2005 uye zvino vanogara muHerdecke, musha wakanyarara kunze kweDortmund.
Jurgen Klopp uye Wife, Ulla
Asi vanofarira mararamiro ehowbiz uye vachikumbira magazini paimba yavo yezororo yakasvibiswa paNorth Sea chitsuwa cheSylt. Jurgen naUlla vakasangana pabar mu Mainz uko Bundesliga ainzi Mainz 05, uyo Klopp aiva maneja, aipemberera nguva dzose. Ulla akanga ari muchengeti wemiti uye haana kumbofarira mutambo uye haana kuziva kuti Klopp aiva ani, asi zvakadaro aifunga kuti akanga achifadza. Vakaroora vakaroora muna December 2005. Vose Ulla naJurgen vakanga varoorwa, uye mumwe nomumwe anounza mwana muukama. Mwanakomana waJurgen, Marc, akatamba kuBorussia Dortmund kusvikira apedza basa mu 2012 panguva ye23 chete
Jurgen Klopp Kuberekwa Nhau Plus Untold Biography Facts -chitendero
Klopp muKristu, ndinofanira kutaura, uye ndinotenda kuna Mwari. Maonero ake echiKristu anoreva kuti tine hupenyu humwe chete uye isu tinofanira kuedza kuita zvakanakisisa. Maererano naKlopp, 'Ndizvo zvandinoedza kuita. Ndinoita zvandinokwanisa kuburikidza nekufadzwa zuva rega rega sokunge kuti ndiro rokupedzisira. Ndinonakidzwa nokupemberera, kunwa kana zvimwe nokuti mangwana inogona kuva mugumo.
Jurgen Klopp Kuberekwa Nhau Plus Untold Biography Facts -Kunyika Pasi Pamoyo
Panzvimbo pokutenga motokari dzemotokari, Jungen Klopp anofarira kutora chitima kuenda kumba kwake mushure mokunge bhora rake rikwikwidzana. Mushure mekusimuka kubva muchitima, Klopp anoda kutora kufamba kwenguva refu kuenda kumusha. Akabvuma kuti anowanzotamira kumusha mushure mechikwata kuti afunge pamusoro pezvaaizoita zviri nani.
Nei Jurgen Klopp achida kutora matarenda.
Jurgen Klopp Kuberekwa Nhau Plus Untold Biography Facts -dzidzo
Panguva yekutamba kwake, Klopp akawana diploma mune zvemitambo yesayenzi kubva kuYunivesiti yeGoethe kuFrankfurt. Zvimwe zvinoshamisa, tsananguro yake yakanyanya kurudziro rwendo, panzvimbo yebhola.
Jurgen Klopp Kuberekwa Nhau Plus Untold Biography Facts -Bvudzi Kubika
Klopp akanga ane bvudzi rakatsvaira, rakafanana naWayne Rooney, mu2012 uye anozvikudza zvikuru kuti rakabuda sei.
The Jurgen Klopp ndebvu Nyaya
Kutaura nevanyori venhau muhurukuro panguva iyo akati: "Hungu, ichokwadi. Ndakatarisa bvudzi. Ndinofunga kuti migumisiro yacho yakanyatsonaka, handizvo here? "
Jurgen Klopp Kuberekwa Nhau Plus Untold Biography Facts -Celebration Style
Murume wepamberi 6.4 anozivikanwa kuva nemhemberero huru kwazvo.
Jurgen Klopp mutambo wokupemberera
Kunyangwe kuri kuita mutambo wekunakidza, achifamba-famba pauswa pabhudzi rake kana kutsvoda vatambi vake vese Liverpool vatevedzeri vanogona kunge vachinyanya kutarisa vachichera kunze semitambo. Klopp kunyange kubvarura musungo kamwe panguva yemhemberero yakakurumbira.
Jurgen Klopp Kuberekwa Nhau Plus Untold Biography Facts -Anofarira kuita zvinhu zvakasiyana
Apo Borussia Dortmund vakanga vachigadzirira Champions League yavo kurwisana naArsenal mu2014, Klopp akashandura mukana wokuti adzire kuEmirates stadium uye akatora boka rake kuLondon Park Regent pane.
Alexander Isak Nhau yehucheche Plus Untold Biography Facts
Robert Lewandowski Utano Hwenyaya Plus Untold Biography Facts
Yakagadziridzwa zuva: Kubvumbi 19, 2019